Maro ny naratra tamin=E2=80=99ny lalao famaranana baolina kitra Ambatofinan= drahana.
Niteraka savorovoro sy sahotaka ny lalao famaranana baolina kitra tao Am=panaovampoara Ambatofinandrahana ny alahady 05 aogositra lasa teo.
Nilamina ny lalao voalohany izay nifanandrianan’ny ekipa vehivavy =dia Ampanaovampoara sy Ambolomborona, resy 3 noho 2 ny ekipan’Ampanao=vampoara nanoloana an’Ambolomborona tamin’io lalao voalohany io=. Teo amin’ny lalao nifanaovan’ny ekipa lehilahy kosa, Golgota =nifanandrina an’Ampanaovampoara dia nampiditra baolina iray ny ekipan=’i Golgota 1 minitra nanombohan’ny lalao ; nosahalain&rsqu=o;ny ekipan’ampanaovampoara izany teo amin’ny minitra faha-13 t=amin’ny alalan’ i Zara, avy eo mbola nampiditra baolina 1 indra=y ny ekipa ampanaovampoara.
Nisy anefa ny fanohanana tsy nety izay nataon’ny vodilaharan’=;izareo Golgota avy eo ka izany no nampikorontana ny lalao noho ny tsy fane=ken’ny ankilany ny fitsarana ny lalao.
Niditra antsehatra nandamina ny lalao mpitandro ny filaminana tany an-to=erana noho ny hamaroan’ireo naratra vokatry ny sahotaka.
Fa noho ny tsy fahatontosan’ny lalao hatramin’ny farany io a=lahady io sy noho ny sahotaka nisy dia tonga tany an-toerana ireo mpitsara =Nationaly zanak’Ambatofinandrahana nandrindra sy nandamina izany, ka =tapaka fa ny alahady 12 aogositra izao no hiverina ny lalao famaranana ka e=o Ampanaovampoara hatrany no anantanterahana izany.
Efa nandray an-tanana amin’ny hiravonan’ny fandriampahaleman=a any antoerana avokoa moa amin’izao fotoana izao ireo heri-velona re=hetra ny distrika ; na ny ara-panjakana, na ny fiarahamonimpirenena na= ny Raiamandreny to-teny eo amin’ny fiaraha-monina.